Ihe siri ike: nkọwa, njirimara, ngwa - Ruta - 2019
Herb Ruta na-esi ísì utọ nwere nnukwu ihe - dịka ọgwụ, na dịka nsi, nakwa dịka ihe si nri. N'isiokwu a, ị nwere ike ịmụta ihe niile banyere mgbọrọgwụ na ihe ngosi maka ojiji. Anyị ga-agwakwa gị gbasara njirimara nke nchịkọta nke ọgwụ ọgwụ a na contraindications.
Ihe omimi nke osisi
Gịnị bụ mgbọrọgwụ bara uru: ụlọ ahịa ọgwụcological
Mkpụrụ ọgwụ nke rue: esi eji osisi na nkà mmụta ọgwụ
Otu esi eji esi nri
Ruta: esi kwadebe ma chekwaa ihe ndi ogwu
Ruta: nkọwa nke osisi ọgwụ
Herb rue na ihe ngwọta ya maara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, dịka foto nke osisi perennial maara. Ị nwere ike ịmata ya n'ọhịa site na njirimara ndị a:
ezi ọkpọ na nnukwu ọnụ ọgụgụ alaka;
osisi dị elu - site na 20 ruo 80 cm;
elongated, ovate leaves, nke ọ bụla nwere ọtụtụ cuts; epupụta bụ anụ ahụ, nwere streaks nwere nnukwu ọdịnaya nke mmanụ dị mkpa;
a na-etinyere okooko osisi n'elu elu nke ị ga, ebe ha na-anakọta na thyroid panicles;
agba okooko osisi - greenish-odo;
okooko osisi nwere ezigbo okpukpo;
oge okooko osisi bụ June-July.
The rue nwere ọtụtụ aha dị iche iche - mgbọrọgwụ dị ụtọ, na-esi ísì ụtọ, ogige na ọbụna dị mma. Mgbe ụfọdụ a na-akpọkwa zimozelen. Na mgbakwunye na iji ọgwụ, ọ na-adịkarị ka ifuru osisi.
Ị ma? E nwere ọtụtụ nkwenkwe slavic metụtara agba nke rue. Dị ka otu n'ime ha si kwuo, ugboro anọ kwa ọ bụla n'abalị nke ezumike nke Ivan Kupala, okooko osisi edo edo nke rue na-acha uhie uhie ma nyere ụmụ agbọghọ ahụ aka ka ha hụ ndị ha hụrụ n'anya n'anya.
Ruta bu osisi nke nwere otutu ogwu, nke ufodu n'ime ha bu nsi. Karịsịa, na osisi a ị nwere ike ịchọta:
dị ezigbo mkpa mmanụ (1.2%);
flavocrolutin (ihe na-erughị 0.1%);
furocoumarin (ihe na-erughị 0.1%);
xanthoxin (ihe na-erughị 0.1%);
agha (ihe na-erughị 0.1%);
Bergapten (ihe na-erughị 0.1%);
Quercetin (karịa 2%).
Ọbụna ọgwụ organic, gụnyere malic na acid valeric, nọ na mejupụtara nke ahịhịa a. Mgbe ị na-ewere obere ihe site na rue, i nwere ike imeju vitamin C.
Ogige rue bụ ihe dị iche iche bara uru, nke a na-eji ya kpọrọ ihe ọbụna na nkà mmụta ọgwụ. Karịsịa, a na-eji herb rue mee ihe n'ịgwọ ọrịa dịgasị iche iche dị ka ụzọ isi nweta ihe ndị a:
mmegide nke uterine na-akpali akpali (na-eme ka ọbara na-eto eto na-abawanye).
O kwesịkwara icheta na iji ọgwụ na ọgwụ na-eme ihe na-adabere n'okporo ámá nwere ike ime ka ụbụrụ ahụ dịkwuo njọ na redio radraviolet, nke ga-esi na ya nwere ike ịnwe ntabi anya na-atụghị anya ya.
Ị ma? Ihe eji eme ọgwụ na-eme "Rutin" na "Akara" ("Radiculin") na-adabere na isi ísì ụtọ. Dabere na Rutin, a na-eweghachi vitamin P, na Akofit na-enye ohere iji merie radiculitis.
Ruta bụ osisi nke nwere ọtụtụ ihe ngwọta, bụ nke ọ dịworo ogologo oge na nkà mmụta ọgwụ. Maka ọgwụgwọ ọrịa dị iche iche jiri teas, ụgwọ, infusions. A na-eji nke a eme ihe maka ime ụlọ na nke mpụga. Na nkà mmụta ọdịnala, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ntụziaka site na rue, ma ha kwesịrị iji nlezianya kpachapụ anya. Echefula na mgbọrọgwụ dị n'etiti osisi nsị:
E jiriwo Ruta na tincture mee ihe dị ka disinfectant, nke a na-eji na conjunctivitis maka ịsacha anya site na nzuzo nzuzo. A na-eji tincture nke rue mee ihe maka nje dị iche iche na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ na-ejikọta ọbara.
Broths si rue gosiri na ọ bụ ihe ngwọta dị irè maka inflammations nke eyelids, anụ rashes, frostbite, fungal dermatitis na purulent Juda. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, a pụrụ ịmepụta ihe ndị a na-eji eme ihe na ihe ndị e ji eme ihe site na decoctions na ahịhịa.
A na-ejikwa ebe obibi bred mee ihe. A na - enweta ya site na mmiri nke dị ọhụrụ (a na - enweta mmanụ na - acha akwụkwọ ndụ) ma ọ bụ nke a mịrị amị rue (mmanụ mmanụ na - enweta). A na-eji mmanụ dị na aromatherapy maka isi na ntị ihe mgbu. Ọ chọpụtala na ọ na-eji ya eme ihe na rheumatism na sprains. Na mba ụfọdụ, eji perfumery eme ihe.
Iji kwadebe ihe na-ekpo ọkụ nke rue rue, n'ihi na 200 ml nke mmiri sie mmiri na-eji nanị 1 teaspoon nke mịrị amị. Mgbe a na-etinye ya maka minit 10, a ga-enyochasị ya na ingested ọ bụghị ihe karịrị iko 0,5 2-3 ugboro n'ụbọchị. Iji nweta infusion oyi, a na-eji ihe dịka 400 sie siere ụdị ahịhịa a, ma na-eme ka mmiri dị mma, ma tinye ihe dị ka awa iri. A na-ewere ihe na-akpata ihe karịrị ugboro 4 n'ụbọchị maka iko 0,5.
A na-akwadebe infusions na-egbu egbu site na mgbọrọgwụ, nke a na-eji eme ihe n'èzí. Maka nkwadebe nke ọgwụ ahụ, naanị mmanya 40% ga-adabara, nke a na-agbakwunye otu ụzọ n'ụzọ iri nke ahịhịa ya na mkpụrụ mmanya (10 g nke ahịhịa dị maka 100 ml mmanya).
Ị ma? N'ihe na-abụghị omenala India, a na-eji mgbọrọgwụ mee ihe dịka ụzọ nwere ike isi mee ime ahụ.
N'agbanyeghị na ọnụnọ dị na mgbọrọgwụ nke ọ bụghị nanị uru bara uru, kamakwa ihe ndị na-eme ka a ghara ịkọwa ya, a na-ejikwa ya na nri, ebe o kwesịrị ịhụ ya n'anya. Eji ya na nri, naanị akwụkwọ nke rue, nke dị mkpa ịnakọta ọbụna tupu okooko. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na akwụkwọ ọhụrụ na akọrọ nwere okpukpo na uto dị iche iche:
ọhụrụ rue yiri ngwakọta nke eyịm ye garlic;
mgbe a mịrị amị, akwụkwọ ya dị mma maka ịme tii, ebe ọ bụ na ha na-esi ísì ụtọ dị ka mmanụ ọkụ.
A na-etinye Ruta na vinegars, mmanya na ọbụna beri tinctures. Ọ bụrụ na ị gbakwunye cheese ruo cheese, salad, sauce ma ọ bụ ọbụna anụ anụ, ụtọ ha ga-emeziwanye. A na-eji Rutu ọbụna maka pickling mushrooms, tomato na cucumbers. Ọ na-aga nke ọma na ngwa nri ndị dị ka sage, cumin, rosemary na garlic.
Ọ dị mkpa! Iji zere nsị ọjọọ, mgbe a na-etinye ya na nri, ị gaghị eji ihe karịrị 0.15 g nke ahịhịa a na otu ọrụ. Na efere ọkụ, a na-agbakwunye ya 1 nkeji tupu ọkụ agbanyụ agbanyụ.
Ngwurugwu bara uru nke rue na-eme ka o di mkpa ichikota ma nweta ihe ndi ozo, obu ezie na a na-ejikwa ya na steeti ala. Iji kwadebe ngwaọrụ ọgwụ, ọ dị mkpa ka ichere maka oge okooko nke rue, mgbe ọ ga-ekwe omume ịnakọta alaka osisi na-eto eto, nke ọtụtụ okooko osisi na-ama okooko. Okwesiri iburu n'uche na mgbanye osisi nwere ike buru oke ibu, ya mere, oburu na ichoro ka ogho abuo di nkputankpu 20 jiri onye nlekota.
Ọ dị mkpa! N'oge nchịkọta nke rue kwesịrị ịrụ ọrụ na gloves. Mkpịsị aka na akpụkpọ ahụ nwere ike ịkpata ọkụ ọkụ, mmiri mmiri na ọzịza.
Usoro ziri ezi nke ihicha rue rue gụnyere itinye ahihia na-acha na oyi akwa n'ime ụlọ dị mma, ebe ìhè ìhè anyanwụ agaghị ada na ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-anakọta ya na iko ma ọ bụ ígwè ígwè ma debe ya n'ebe akọrọ. N'oge nchekwa, anyanwu ekwesịghị ịda na ahihia ahụ, n'ihi nke ọ nwere ike ịla n'iyi ma hapụ ihe onwunwe ya. Oge nchekwa nke nkwadebe ọgwụ dị otú ahụ abụghị ihe karịrị afọ 2.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na mgbọrọgwụ nke ahịhịa ahụ nwere ngwa ngwa, a na-egbochi ọgwụgwọ na iji ya eme ihe n'ọtụtụ ìgwè mmadụ. Mgbe ọ na-emebiga ihe ókè, mgbọrọgwụ nwere ike ịkpata mgbakasị dị njọ nke akpụkpọ anụ mucous nke tractes tract ụmụ mmadụ, na-akpata nzere nke ire na larynx. N'ikpeazụ, onye a na-egbu nsị nwere ike ịdị na-ahụ nkọ, ọgbụgbọ na ịgba agbọ na-apụta. Ọ bụrụ na ị gaghị eme ka oge na-aga, enwere ike inwe nsogbu n'ime imeju na akụrụ.
Maka ihe ndị a, a na-egbochi ya ịṅụ ọgwụ na ọdịnaya ya na ụmụaka, yana ụmụ nwanyị dị ime. Ọzọkwa, a gaghị ekwe herb rue na ngwa ngwa ọgwụ maka ọdịnala dị otú ahụ:
uterine ọbara ọgbụgba;
n'oge ịgba oge;
ọnyá afọ na ọnyá afọ duodenal;
abawanye acidity nke afo;
N'ọtụtụ ọrịa, ahịhịa herb rue salutary, ọ bụ ezie na ọ bara uru na-echeta banyere contraindications. Jiri nlezianya kpachapụ anya ka ị na-akpa àgwà mgbe ị na-anakọta rue, yana ịkwadebe ọgwụ mgbochi ọgwụ. Ikwesighi iji ogwu a n'enyeghi ndi okachamara na ihe omuma banyere uzo eji eme ihe.
Udara na elu mkpụrụ ezi mma ntu oyi - Lyubskaya iche iche
Rabbits nke ụdị ogwu
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ihe bụ mgbọrọgwụ bara uru: iji ọgwụ na-eme ihe na ọgwụ na nkà mmụta ọgwụ